Waxa aan murugoodaa marka aan: — Waxa aan murugoodaa marka aan xiiseeyo waqti fiican oo i dhaafay in uu soo noqdo. April 24, 0 Xikmado Jaceyl 1. Jaceylku waa waxa ugu quruxda badan ee la heysto, waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo 2.
Goorti aad tiraahdo Waan ku jeclahay, waxaad ballan ku … Halkudhegyo Laga Faaidayo Casharro Muhiim Ah Iyo Waayo-aragnimo February 22, 0 Duruufaha adduun ee maalinlaha ah iyo waayoaragnimada qofku korodhsanayaa waa casharo muhiim u ah nolosha qofka la kulmayaya iyo dadka kaleee uu u sii tabinayo. Qormadan waxa aynu ku eegaynaa halkudhegyo dad caan ahi ka tageen oo waano ka noqon kara waayaha adduunka. Sharafta noloshu maaha maaha in aanad weligaa kufin, balse waa in aad kici karto mar kasta oo … Xikmado Dhaxalgal Ah November 20, 0 Sida uu sheegay nabi muxamed N.
September 13, 0 Xikmadda Maanta: — Waxaa uu waayuhu I baray in dadka kuwa iigu waxyeelka badani ay yihiin kuwa aan kalsoonidayda oo dhan siiyey. Shakespeare — Si aynu dadka ugu qancinno sida aynu u fikirayno, marka hore waa in aynu fahamno sida ay iyagu u fikirayaan.
Saaxiibada aad leedahay saddex nooc ayay u kala baxaan: B Kuwa ku caawiyay waqtigi aad dhibka ku jirtay. T Kuwo kaa tagay xilligi dhibaatada ku heysatay. J Kuwa iyagu dhibta ku gashay 2. Qeybta ugu wanaagsan Nolosha waa; Marki Qoyskaagu kuu fahmaan sidi Saaxiib oo kale, Saaxiibadaana kuu taageeraan sidi Qoyskaaga oo kale 3.
Saaxiibada beenta ah waa … Halku-Dhegyo Xikmad Badan January 14, 0 1- Dadaal iyo qiime waxaan ku bixinaa xirashada dharka ugu qurxoon iyo kuwa ugu qaalisan, balse waxaan is ilowsiinaa bedelista dhaqamada iyo dabeecadaheena guracan. Ogow, weelka qaaligaa ma sameeyo cunto dhadhan macaan.
Saaxiibtinimadu ma aha qofka aad waqtiga ugu dheer taqaanay. Saaxiibku waa qofka intuu kuu yimaado ku yiraahdo; anigaa halkan kuu jooga oo ku garab taagan, ficilna ku cadeeya 2. Dib waad u aqrisan kartaa qoraal, fariin ama Buug, Waad ku soo ceshan kartaa video muuqaal ah ama mid dhageysi ah laakiin … Page 1 of 51 2 3 4 5 » Advertisement.
Jacaylku waa shey waawiya oo kaa caawin kara yareynta murugada iyo walwalka. Farriimahan Jacaylku waxay kaa caawin karaan inuu xiriirkiinu noqdo mid xiiso badan. Haddii aan daacad ka ahaado tan, jacaylku wuxuu ka badan yahay uun baashaal, helitaanka waxyaabo lacag ah, ama muuqaal kale oo muuqaal ah oo dadku u yaqaan jacayl. Dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa inay doorbidaan muuqaalka muuqaalka jacaylka ee ka sarreeya dareenka asalka erayga.
Falsafad ahaan, jacaylku waa fikrad aan la taaban karin. Aniga dareen ahaan, maskaxiyan, iyo ruux ahaanba waxaan isku xiraa laba maskaxood. Kuwani waa saddexda atam ee sameeya jacaylka dhabta ah. Xiriir ma ku jirtaa? Oo miyaanad ka war qabin waxyaabaha qaarkood ee aad samayn kartid si aad u qarxiso maskaxda lamaanahaaga?
Uma baahnid inaad ka walwasho maxaa yeelay waxaan hayaa erayo dhiirigelin iyo kalgacal badan leh oo aad u adeegsan karto inaad ku kasbato fikirka lamaanahaaga adigoo adeegsanaya Wadahadalka Whatsapp ama dhexdhexaad kasta oo kale. Waa inaad ka dhigtaa lammaanahaaga inuu dareemayo inuu muhiim ku yahay xiriirka kaliya adoo iibsanaya hadiyado, laakiin sidoo kale inaad ku darto waxoogaa uunsi ah iskuxirka si aad u muujiso inaad daryeesho.
Qof kastaa wuxuu jecel yahay jacaylkiisa inuu sameeyo wax duurjoog ah iyo jacayl. Si aad lammaanahaaga ugu soo jeedin jacaylka adiga kuu ah, waa inaad si joogto ah ugu dirtaa farriimo jacayl oo xiiso leh oo dhiirrigelin ah.
Wax kasta oo aad sameyso iyo wixii aad tidhaahdo, waxaad iga dhigeysaa inaan dareemayo mid qaas ah. Jacayl baan kugu qabaa. Markasta oo aad ka fogaato aniga, ayaa aan kuu sii dhowaanayaa. Qalbigeygu markasta wuxuu ii sheegi doonaa inaad tahay gacaliyahayga, xitaa hadaanan wax dhihin. Jacaylku waa sida cadceedda oo kale. Waxay qofka siisaa u siisaa iftiin dhalaalaya. Oo waxaa jira dareen diiran oo dhan jirka. Waxay kala furtaa indhaha waxayna kicisaa ruuxa.
Markay dhammaatana, waxay ka tagtaa raad xiddigo yaryar ah si loogu wargeliyo adduunka inay weli jirto. Waligey qof uma jeclaan sida aan kuu jeclahay, mana qiyaasi karo inaan jeclaado qof kale. My macaaney, waan ku jeclahay! Jacaylka, xiisaha, daryeelka, iyo taageerada ayaa ah macnaha runta ah ee adiga. Laguma barbar dhigi karo qof kale. Baby, waan ku jeclahay In kasta oo aadan jir ahaan joogin, haddana waxaan dareemayaa joogitaankaaga, isku duubni iyo inaad i hayso.
Gacaliye, aad ayaan kuu jeclahay. Waan jeclahay qosolkaaga joogtada ah; dhaqankaaga dagan iyo jacaylka nacaybku wuxuu igu kallifaa waalli wuxuuna igu dhaliyaa inaan kaa fikiro markasta. Gacaliye, waan ku jeclahay. Jacaylka aan kuu qabo wuu sii kori doonaa halkii aan ka libdhi lahaa, oo waxaan sii noolaan doonaa inaan aad kuu sii jeclaado. Marnaba kama qoomameyno inaan ku jeclahay, gacaliso, maadaama aan ku jeclahay macnaheedu waa inaan sameeyay wixii saxda ahaa.
Jacaylkaagu waa sida neecaw qabow oo ka timaadda webiga habeenkii, ama falaaraha qorraxda maalintii. Qalbi aan iin lahayn, adigaa ugu fiican. Runti waan ku jeclahay, macaanto! Ma sahlana in la helo qofka saxda ah, laakiin waa mahad Ilaah, waan ku helay; waxaad tahay midii aan raadinayey. Xabiibi, si dhab ah ayaan kuu jeclahay.
Dadku waxay ku andacoodaan in ku jeclaantaadu ay xanuun badan tahay oo u baahan allabaryo badan. Laakiin waxaan door bidi lahaa inaan silciyo oo aan bixiyo allabaryo badan intii aanan kugu caabudin, gacaliyahaygow. Waxay imaaneysaa meesha aanan hubin sida aan kuguula kulmay; waxaad tahay qofka kaliya ee noloshayda wax ka badali kara. Waan ku jeclahay, gacaliso. U oggolow iftiinka inuu ka ifo jacaylkeenna, oo u keenaya inuu xitaa ubax yeesho, roobkuna u qoyo una sababo inuu soo kobco.
Qalbi macaan, waan ku jeclahay! Waan hubin doonaa inaan sameeyo wax walba oo aan karo si aan u noqdo nuskaaga ugu fiican. Waan ku jeclahay, gacaliso! Ma awoodo inaan ku waayo qof kale, markaa fadlan ha siin qalbigaaga qof kale, gacaliye. Jacaylka aan kuu qabo waligiis ma libdhi doono, wax kastoo dhaca. Xaalad kasta oo jirta, waan ku garab istaagi doonaa.
Waan ku jeclahay adiga sababta oo ah sida aan dareemayo marwalba oo aan kula joogo, maahan wax aad heysato darteed. Ma aanan ogeyn waxa uu jaceyl yahay ilaa aan kula kulmay, ka dibna waxaan daah furay waxa uu yahay jaceylka dhabta ah markii aan kala fogaanay. Waan ku jeclahay. Waxaan isku mashquuliyaa waxyaabo badan oo aan ku guuleysto, haddana weli waan kaa fakaraa mar kasta oo aan nasto.
Nolosha ma qiyaasi karo adiga la'aantaa, macaanto. Jacaylka aan kuu qabo, macaanto, waa mid dhab ah oo aan kuu doorto inaad noqoto midka kaliya ee aan weligay caabudo.
Waxaan noqon doonaa daruurtaada cirka, garabkaaga inaad ku ooydo, oo waan kuu joogi doonaa markasta oo aad ii baahatid. Waxaad ka badan tahay milyan doollar, haddana waxaad ka mid tahay hal milyankii. Macaanto, waan ku jeclahay. Dhoola cadeyntaadu waa sida qorraxda oo kale, waxayna iga dhigeysaa maalinteyda. Kuma caawin karo laakiin waan kuu dhici karaa maxaa yeelay fikradahaaga maskaxdayda ayaa sameeya heesta ugu quruxda badan. Waxaan is arkay anigoo dhoola cadeynaya sabab la aan maalin maalmaha ka mid ah, ka dibna waxaan gartay inaan adiga kaa fikirayo.
Haa, waan khaldan nahay, laakiin jacaylka dhabta ahi wuxuu noo badali doonaa dad aan iin lahayn. Nolosha marka laga soo tago, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aan daryeelo, tan koowaad waa jacayl, tan labaadna waa adiga. Waxaan kugu jeclahay wax kasta oo aad tahay, wax kasta oo aad soo jirtay, iyo wax kasta oo aad noqon doonto. Waad ku mahadsantahay adkeynta inkasta oo aad hayso sabab kasta oo aad ku tagi karto. Aad baad ugu mahadsantahay inaad nolosha ka dhigtay mid fudud markii arrimuhu adkaadaan.
Aadna waan ugu faraxsanahay inaad adigu hadda tayda tahay. Waxaan ka rajeynayaa inaan waligeen wada joogno markasta oo aan hammi sameeyo. Waan ku kalsoonahay inay taasi dhici doonto maadaama aad boos gaar ah ku leedahay qalbigayga. Waxay u egtahay in adiga oo ku jecel uu yahay mid dabiici ah sida neefsiga oo kale. Sideen ku joojin karaa? Bal eeg kumbuyuutarka; U iyo Anaga ayaa is xiga.
Taasi waa sida alifbeetada loo abaabulo madaama jaceylkeyga aan dhamaaneyn ee aan kuu qabo waligiis tagi doonin inta aan aniga iyo adiga wada joogno. Weligay dunida kuu ballanqaadi maayo, laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa wax kasta oo qalbigaygu doonayo maxaa yeelay adigaa iska leh qalbigayga. Adduunyadaydu waxay dareentay inaan qiimo lahayn aniga maxaa yeelay waxay ahayd mid madhan oo murugaysan.
Waxaan u arkaa naftayda inaan aad ugu nasiib badanahay inaan ku haysto noloshayda maxaa yeelay waan ogahay in wax kastoo dhaca, jacaylka aad ii qabto uusan waligiis libdhi doonin. Jaceylka marna lama qiyaasi karo.
Kaliya dareenka ayaa ogaan kara. Waxaad ku rinjiyeysay nolosheyda midabada qaanso roobaadka. Inta jacaylkaagu ila jiro, wax kale uma baahni!
Haysashada qof kula mid ahi waa dhacdo naadir ah. Maalin kasta iyo daqiiqad kasta, waan ku faraxsanahay hadiyaddan. Wax kasta oo noloshu nagu soo rogto, waan kuu sujuudi doonaa ilaa dhamaadka cimrigayga! Maalin kasta, waqtiga aan ku qaato inta badan, jacaylka aan kuu qabo ayaa badanaya. Waxaan balan qaadayaa inaan ilaaliyo qalbigaaga jilicsan ee naxariista leh intaan noolahay. Jacaylka, waxay dhahaan, waa la dareemi karaa oo keliya, lama arko. Si kastaba ha noqotee, way qaldameen.
Waa wax aan arkay marar badan.
Balse, macaanida wanaagsan iyo erayada hagaagsan waxaa la unki og yahay oo fudud macaanida. In badan ayaan arkay waratada suuqa iyo dadka xirfadaha iyo sancooyinka leh oo curinaya weedho macnahoodu sarreeyo balse aan awoodin curinta laba eray oo qurxoon, macnahaasna gudbin kara.
Sideedana waxa dadka soojiita waa erayada gudbiya macaanida, waana isla erayada kuwa dadka dareenkooda qafaasha. Dadka dhammaanti macnayaal wanaagsan way soojeedin karaan oo qof jaahil ah oo haddana maskax badan waa uu jiraa. In qofku uu wax macno leh ku hadlana waa wax maskaxda iyo garashada ku xirane, maaha wax cilmi barasho oo qura u baahan. Inta aad firfircoon tahay ee aan caajis iyo daal ku haleelinna ku shaqayaso. Kolka aad noogto ka naso, waayo? Wax kasta way isdhimaan kolka la daalo, wax kasta oo qaali ahna diiftu way qiime dhintaa.
Waxyiga naftu waa il biyood, hadba xoogaa laga waraabo soo daysa oo haddaad u moogaysatidna aad ka dhargayso oo aad nafacsanayso balse, haddii aad dhuritaanka ku badiso way gurtaa, waxtarkeeduna wuu isdhimaa. Ogsoonoow in dedaalkaaga tirada badan ee aad maalintii samayso ee kuugu deeqa afkaarta uu yahay mid u baahan kaltamid iyo nasin ka badan inta ay il-biyeedku u baahan tahay. Iska ilaali qardajeexnimada, waayo wax walba way kaa xannibmayaan, xirnaanshuhuna waxuu kaa gurinayaa macaanida, erayadana wuu kaa foolxumaynayaa.
Waa ceebe iska dhawr. Haddaad rabtid in aad ka baxsato gorfayn iyo dhaliilid, marka horaba tix iyo tiraabba ha curin.
Haddiise aad lugaha la soo gashid oo aadan u dhugmo yeelan, xirfaddaadana aadan kobcin waxaa kugu wiirsanaya mid aad adigu ka ceeb yar tahay, waxaana ku liidaya mid kaa hooseeya. Marka aad istiraahdid wax curi haddii jawigu kaa hor-istaago tidcitaanka erayada oo intaad u fakartid aad kari weydo ha degdegin, iska sug oo arrinka u qaado daruufaha maalintu xaal ay wataan, la sugo gudcurka habeenka oo xilligaad firfircooni dareentid iskuday.
Kolkaas waa suuragal in ay isugu kaa aaddo oo fs 14 unlock jawaab heshid. Haddii Adiga oo in badan maskaxda nasiyay oo haddana kaadsiiyo badan sameeyay, waqti dheerna sugay ay kuu suuroobi weydo in aad qoraal qumman isku aaddiso waxaa kugu habboon in aad dib isuqiimayso oo aad ogaato sancada aad ugu xiisa badan tahay oo deetana aad ayada ku dedaasho, waayo?
Haddaan cad isukiin gelin ma aadan xiisayseenba. Wax walbaana wixii la qumman bay u hiloobaan. Waxaa habboon in aad taqaanno qirada macaanida si aad u miisaanto waxa aad qorayso iyo dadka akhrisan doona. April 24, 0 Xikmado Jaceyl 1. Jaceylku waa waxa ugu quruxda badan ee la heysto, waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo 2. Goorti aad tiraahdo Waan ku jeclahay, waxaad ballan ku … Halkudhegyo Laga Faaidayo Casharro Muhiim Ah Iyo Waayo-aragnimo February 22, 0 Duruufaha adduun ee maalinlaha ah iyo waayoaragnimada qofku korodhsanayaa waa casharo muhiim u ah nolosha qofka la kulmayaya iyo dadka kaleee uu u sii tabinayo.
H xikmaddu waa baadi ka maqan qofka muslimka ah. Haddaba halkaan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah xikmadihii laga dhaxlay waaya araggii dunida soo maray. Konfooshiyoos waa faylasuufki ugu horreeyay dalka china, sidoo kale waxa uu ahaa nin aad u xikmad badan. Haddaba halkaan kaga bogo xikmadaha dhaxal galka ah ee laga … Erayo Xikmad Badan Oo Ku Saabsan Hinaasaha Ama Masayrka September 19, 0 Waa qormo aynu ilo kala duwan oo afka Carabiga ku qoran aynu ka soo ururiney oo iftiiminaya ereyo xikmad badan xambaarsan oo laga yidhi hinaasaha ama maseyrka.
Haddii aad doonayso in … Xikmad Dahabi Ah February 13, 0 1. Tus Xushmad xitaa dadka aan u qalmin; Ma aha ka falcelin dabeecadooda, laakiin waa sawir ka bixin adiga dhaqankaaga qadarinta ku dhisan 3. Mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso inti uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawaceysaa keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin 2.
Vudoll on Erayo qurxoon